शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् | गृहपृष्ठ
शुक्रबार, फाल्गुन ११, २०७४
ADBL 340 (4099) (0)
AHPC 196 (4416) (1)
AKPL 318 (1253) (-1)
ALICL 847 (738) (-7)
API 380 (664) (5)
ARUN 160 (10) (3)
BARUN 187 (330) (-3)
BNT 7165 (20) (274)
BOKL 375 (14138) (5)
BPCL 545 (2575) (0)
CBBL 1000 (2005) (-1)
CBL 173 (16582) (0)
CCBL 203 (166215) (3)
CCBLPO 201 (27339) (-4)
CHCL 850 (8451) (-4)
CHL 171 (33) (0)
CIT 3455 (366) (25)
CLBSL 816 (180) (16)
CZBIL 277 (6751) (0)
DBBL 181 (16723) (1)
DDBL 829 (2363) (-11)
DHPL 136 (633) (-4)
EBL 835 (15944) (-6)
EDBL 361 (134) (-1)
EIC 1600 (166) (0)
FMDBL 570 (5068) (-1)
FOWAD 3290 (2985) (-11)
GBBL 195 (9768) (0)
GBIME 321 (21728) (0)
GBIMEP 176 (3586) (0)
GDBL 239 (884) (1)
GFCL 148 (30) (0)
GILB 1400 (87) (15)
GLICL 907 (6980) (1)
GRDBL 185 (60) (-3)
GUFL 136 (29) (0)
HAMRO 160 (300) (0)
HBL 656 (1886) (-9)
HDL 1201 (10) (-24)
HGI 476 (4353) (-4)
HIDCL 163 (15214) (-2)
HPPL 352 (2220) (-3)
ICFC 205 (600) (0)
IGI 950 (130) (-6)
JBBL 155 (1723) (-1)
JBNL 178 (29251) (-2)
JEFL 125 (157) (2)
JFL 170 (493) (0)
JSLBB 2915 (22) (0)
KADBL 222 (10) (3)
KBBL 242 (3068) (2)
KBL 275 (20447) (4)
KEBL 320 (50) (-3)
KKHC 136 (379) (-2)
KMCDB 1310 (60) (0)
KMFL 1490 (419) (0)
KNBL 146 (135) (-2)
KRBL 128 (801) (1)
KSBBL 164 (10102) (1)
LBBL 164 (3348) (1)
LBL 264 (6386) (-1)
LEMF 9.51 (2000) (-0.09)
LGIL 570 (5926) (5)
LICN 1875 (1182) (-1)
LLBS 1217 (652) (-23)
LVF1 11.5 (11000) (0)
MBL 254 (6818) (0)
MDB 300 (2260) (0)
MERO 1335 (291) (5)
MFIL 142 (1450) (2)
MLBBL 1020 (10) (20)
MLBL 190 (5376) (0)
MLBLPO 120 (33988) (0)
MMFDB 2950 (247) (10)
MNBBL 427 (8028) (1)
MPFL 284 (50) (-5)
MSLB 2850 (280) (50)
MSMBS 775 (61) (2)
NABIL 1090 (8036) (-5)
NABILP 853 (3281) (-2)
NBB 251 (12678) (3)
NBBL 2309 (620) (-92)
NBF1 16.6 (10000) (-0.05)
NBL 350 (15195) (0)
NCCB 316 (11643) (1)
NEF 9.8 (26395) (-0.15)
NGBBL 643 (2000) (1)
NGPL 219 (243) (-4)
NHDL 213 (540) (-1)
NHPC 110 (17050) (2)
NIB 673 (10408) (-2)
NIBLPF 9.5 (1963) (0.08)
NIBPO 590 (2213) (-1)
NIBSF1 11.65 (1000) (0.04)
NICA 348 (6636) (1)
NICL 1230 (3667) (-24)
NIL 580 (1969) (-3)
NLBBL 746 (2830) (-12)
NLG 984 (220) (-11)
NLIC 1762 (10141) (-10)
NLICL 1445 (4231) (-8)
NLICP 1100 (50000) (0)
NMB 462 (8172) (-3)
NMBHF1 9.8 (5076) (0)
NMBMF 1710 (494) (-16)
NMBSF1 12.6 (43800) (-0.14)
NMFBS 2170 (512) (-6)
NTC 757 (3998) (7)
NUBL 1177 (1335) (-13)
ODBL 231 (156539) (2)
OHL 647 (1107) (-3)
PCBL 307 (5461) (1)
PFL 165 (3485) (5)
PIC 1251 (945) (0)
PICL 760 (20) (-6)
PLIC 1600 (10302) (-19)
PRIN 752 (1020) (-4)
PROFL 202 (20) (-4)
PRVU 230 (13678) (2)
PURBL 203 (676) (3)
RBCL 13421 (777) (71)
RBCLPO 12959 (1818) (184)
RHPC 140 (563) (-1)
RLFL 136 (204) (-3)
RMDC 650 (493) (-1)
RSDC 855 (1466) (-12)
SADBL 189 (1741) (2)
SANIMA 366 (19317) (2)
SBBLJ 204 (873) (-4)
SBI 588 (2644) (1)
SBL 364 (6841) (6)
SCB 980 (4169) (3)
SEF 9.6 (21100) (0)
SEOS 12.07 (1000) (0)
SHINE 291 (306) (1)
SHL 260 (2486) (-2)
SHPC 392 (2743) (2)
SIC 1355 (506) (-1)
SICL 1141 (2518) (-19)
SIL 880 (1282) (-10)
SINDU 147 (276) (1)
SKBBL 1205 (1047) (3)
SKDBL 136 (1398) (-3)
SLBBL 1610 (811) (15)
SLICL 887 (1335) (-13)
SMFDB 1157 (125) (-8)
SPDL 150 (7887) (0)
SRBL 257 (4285) (-3)
SWBBL 1317 (1370) (4)
TNBL 203 (1400) (-3)
TRH 306 (1310) (4)
UFL 212 (1996) (-3)
UIC 1100 (1630) (5)
UMHL 211 (3329) (0)
UNL 27966 (10) (548)
VLBS 861 (257) (1)
WOMI 1550 (313) (11)
Home अन्तरवार्ता शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्
अन्तरवार्ता2views
शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्
मेयर, वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाका मेयर रामस्नेही यादवसँग नगरका विकास योजनाबारे आर्थिक अभियानका संवाददाता दीपेश पौडेलले गरेको कुराकानी :
नगरको समग्र विकासका लागि तपाईंका योजना केके छन् ?
नगर विकासका लागि गाविस हुँदादेखिकै योजनाहरू छन् । सविकका ५ ओटा गाविस रहेको यस नगरपालिका विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सडकलगायतका योजनामा यस नगरपालिका पछाडि रहेकाले यसलाई नै प्राथमिकता दिएका छौं । भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि समस्या रहेकाले योजनामा समावेश गरिएको छ । यस नगरपालिकाको प्राथमिकताको योजना भनेकै विकासका पूर्वाधार हुन् । साविकका गाविसमा रहँदै आएका जनतालाई नगरवासीको अनुभूति दिन यी योजनाहरू महŒवाकाङ्क्षी हुनेछ । नगरवासी जनताका चाहनाअनुसारकै योजना रहेकाले पूरा गर्न प्रयास गर्नेछौं ।
यी योजनामध्ये प्राथमिकताका योजनाहरू केके हुन् ?
यी योजनामध्ये विशेष प्राथमिकता शिक्षा हो । विद्यालय बाहिर रहेकालाई विद्यालय पढाउन पठाउने वातावरण सृजना गर्छौं । विपन्न, दलित, जनजाति र पिछडिएका वर्गलाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याजउनु नै पहिलो प्राथमिकता छ । दोस्रोमा स्वास्थ्य पर्छ । स्वास्थ्य बीमादेखि स्वास्थ्यचौकीको स्तरीकरण गर्नेलगायत स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका बिरामीलाई सहज र सरल सेवासुविधा दिनेतर्फ नगरपालिकाले ध्यान दिएको छ । तेस्रोमा खानेपानी तथा सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यस नगरपालिकामा रहेका सडकहरू जीर्ण रहेकाले स्तरोन्नतिको योजना बनाएका छौं ।
यी योजना सम्पन्न गर्न नगरपालिकालाई कति बजेटको आवश्यकता पर्छ र त्यसका स्रोतहरू केके हुन् ?
नगरपालिकाले ५ वर्षको योजना लिएर अघि बढेको छ । पञ्चवर्षीय योजनासमेत सार्वजनिक भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि करीब ११ करोडको बजेट अनुमान गरिएको छ । नगरको विकास योजना पूरा गर्ने सो रकम अनुमानित हो । तर, आन्तरिक स्रोत पनि छन् । बाग्मती र चाँदी नदी तथा राष्ट्रिय वनसमेत यसै नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने हुँदा नगरका स्रोतहरू प्रशस्तै छन् । यसमा नेपाल सरकारको अनुदानबाट आएको करीब २३ लाख रकम व्यवस्थापन गरिनेछ । नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी निकासीबाट पनि यस नगरले उल्लेखनीय कर सङ्कलन गर्नेछ ।
अहिले स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, यो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न केके चुनौती देख्नुहुन्छ ?
स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मात्र यस क्षेत्रका बासिन्दाले नगरपालिका भएको अनुभूति गरेका छन् । तर, नगरपालिकाको भौतिक संरचनाको भने अभाव छ । यसका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या छ । नगरपालिकाको मुख्य चुनौती भनेको नक्साङ्कन नै देखिएको छ । यसअघि गाविस हुँदा जथाभावी रूपमा घर बनाउने गरेको भए पनि अहिले नगरभित्र घर बनाउँदा अनिवार्य रूपमा नक्सापास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसका लागि नगरपालिकामा इञ्जिनीयर, ओभरसियर र अमिनको अभाव छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर नगरपालिकामा आए पनि कर्मचारीको अभाव छ । त्यसलगतै प्रतिनिधि तथा प्रदेशको निर्वाचन भएको र त्यो सम्पन्न हुनासाथ फेरि नगरपरिषद्मा जुटेका कारण विभिन्न समस्या र चुनौती छन् । वैशाख मसान्तभित्रमा नै नगरपालिकाका योजनाहरू सम्पन्न गराउन लक्ष्य लिएकाले यसमा चुनौती पनि छ । गाविस र नगरपालिका हुँदा दिइने सेवासुविधामा नै फरक छ र त्यो जनतामाझ स्पष्ट नहुँदा समस्या र चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूलाई विकासको मुद्दामा सहभागी बनाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका कारण नै स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकाले राजनीतिक दललाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विकासका मुद्दामा उनीहरूको पनि आवश्यकता पर्ने भएकाले सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ । केन्द्रीय र प्रदेशको बजेटमा नै स्थानीय तह निर्भर रहने गर्छ । त्यसकारण यस नगरभित्र रहेका राजनीतिक दलका पार्टी प्रतिनिधिले केन्द्रीय र प्रदेशको बजेट नगरमा ल्याउन सहयोगको गर्नुहुने अपेक्षा छ । समग्र नगर विकासमा राजनीतिक दलको भूमिका प्रशंसनीय हुने विश्वास लिएको छु ।
तपाईंको नगरलाई अन्यभन्दा फरकरूपमा विकास गर्न नगरमा भएका सम्भावनाका क्षेत्रहरू केके हुन् ?
यस जिल्लामा १६ ओटा नगरपालिका र २ ओटा गाउँपालिका छन्, जसमध्ये एक नगरपालिका वृन्दावन पनि हो । यस नगरपालिकालाई अन्यको तुलनामा फरक बनाउन धेरै स्रोत र साधनहरू छन् । विशेष गरी वनजङ्गल र बाग्मती नदीलाई नै संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकेमा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यस्ता पर्यटकीय सम्भावनाका स्थानहरू यस नगरपालिकाभित्र धेरै छन् । त्यस्ता स्थानको पहिचान गरी विकास गर्दै लैजाने योजनामा नगरपालिका छ । यसले नगरपालिकाको सौन्दर्य बढाउनुका साथै आन्तरिक आयमा समेत वृद्धि हुन्छ ।
लामो समयदेखि स्थानीय निकाय कर्मचारीले सञ्चालन गर्दै आएकोमा हाल जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा काम गर्न कर्मचारीसँग समन्वयको समस्या छ कि छैन ?
विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएकाले कतिपय कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् । तर, विस्तारै उनीहरूले जनप्रतिनिधिसँग गर्ने व्यवहार र कार्यको बारेमा थाहा पाउन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिसँग गर्ने कार्यको अनुभव कर्मचारीमा हुँदै गएकाले यस नगरपालिकामा जनप्रनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय राम्रो छ । समन्वयमा समस्या हुँदैन । यद्यपि, समस्या भएमा त्यसको समाधान गर्दै नगरवासीको हितमा नै कार्य हुनेछ । नगरवासीको विकासमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
जलविद्युतमा इथोपियन मोडल आवश्यक छ
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०८:३४
गोर्खा फिडलाई अग्रणी उद्योग बनाउने लक्ष्य छ
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०८:१९
२०७७ भित्र त्रिशूली–गल्छीको विद्युत् उत्पादन हुन्छ
६ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०६:४२
‘पियाजियो’ थ्री ह्वीलरले २ वर्षभित्र महत्त्वपूर्ण स्थान बनाउनेछ
२ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०९:४९
सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई दबाब
मौसमको कारण उडान प्रभावित
हुलाकी राजमार्ग : ७० करोड थप बजेट माग
‘करप्शन पर्सेप्शन्स इण्डेक्स २०१७’ : नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको सङ्केत
तमोर नदीमा मोटरेबल : आठ वर्षपछि निर्माण तीव्र
१ करोड ५० लाखमा चेञ्जिङ रूमको निर्माण शुरू
जोखीमपूर्ण भवनमा पढ्छन् बालबालिका
‘जनतासँग प्रहरी’ अभियान
विदेशी चिनी उपभोग गर्न उपभोक्ता बाध्य
प्रविधि र नीतिका कारण समस्या : व्यवसायी